Tuesday, 10.22.2019, 01:29pm (GMT5.5)
हुन पनि महाधिवेशनमा संघका नीति, कार्यक्रम र योजना सुन्ने, सुनाउनेभन्दा आआफ्ना पक्षमा भोट माग्ने कामलाई नै अधिकांशले प्राथमिकता दिएका थिए । उनीहरुलाई संस्थाको कार्यक्रमभन्दा आफ्ना मान्छेलाई चुनाव जिताउनु थियो त्यो पनि दलीय आस्थाकै आधारमा । मुलुकलाई केही गर्न हैन कुनै दल विशेषलाई केही गर्न भेला भएका जस्ता देखिन्थे एनआरएनहरु ।
देशका कुनै पनि निकाय राजनीतिकरणबाट मुक्त नभएका बेला गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) राजनीतिकरणबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा भए पनि त्यस्तो पटक्कै देखिएन । नयाँ नेतृत्वका लागि सत्तारुढ दल नेकपा पक्षधर र विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पक्षधरबीच समूहगत रुपमै चुनावी प्रतिस्पर्धा हुनु र आफ्नो पक्षलाई जिताउन जालझेल भएका खबर आउनु दुःखलाग्दो सन्दर्भ हो ।
नेपाली कांग्रेस निकटले नेकपा निकटकाको नाम काट्ने र नेकपा निकटले कांग्रेस निकटका प्रतिनिधिको नाम काट्ने गर्दा मंगलबार साँझ हायात होटलमा चर्को नाराबाजी भयो । बुधबार निर्धारित मतदान नै स्थगित भयो । जापान, अमेरिका, बेलायत जस्ता बढी प्रतिनिधि भएका मुलुकबाट उम्मेदवारी दिएकाहरुबाट यस्तो झेल भएको भन्दै सहभागीहरुले नारावाजी गरे । त्यो नाराबाजी देख्दा लाग्थ्यो एनआरएनएको चुनाव नभएर कुनै राजनीतिक दलको भातृ संगठनको चुनाव जस्तो भयो छ ।
दलीय आस्थाका आधारमा नेतृत्व हत्याउने होडबाजीले एनआरएनएले नेपाललाई के दिन्छ ? विदेशमा रहेर आफ्नो पेशा–व्यवसायमा अब्बल ठहरिएका, विदेशीलाई नै रोजगारी दिने हैसियत बनाएका नेपालीहरु दलीय कार्यकर्ता भएर विभाजित हुँदा उनीहरुले मुलुकका लागि स्वतन्त्र ढंगले काम गर्छन् भने कसरी पत्याउने ? जता गए पनि राजनीतिकरणले शिथिल र जीर्ण भएको नेपालीको मस्तिष्कमा स्वतन्त्र विचार र मुलुकका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना नै छैन । त छ केवल आफू आबद्ध राजनीतिक दल अझ दलभित्र पनि आफ्नो निकटको नेताका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने गलत सोच हावी देखिएको छ ।
एनआरएनएभित्र मडारिएको राजनीतिक ध्रुवीकरणले यो संस्थालाई कहाँ पु¥याउने हो र यसको स्थापनाको उद्देश्य, गरिमा र विश्वसनीयता कति कायम रहने हो यो नै अहिलेको चासोको विषय हो । मुलुकलाई समृद्ध बनाउन अहं भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने हैसियत बनाएकाहरुँ राजनीतिक दलका वफादार कार्यकर्ता बनेर चुनावी मैदानमा उत्रँदा मुलुकले पाउँछ के ?
विदेशमा रहेका नागरिकहरुको मातृभूमिमा गरेको लगानी कुनै पनि देशको आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण अंग बन्ने गरेको छ । भारत लगायतका देशहरुमा यस्तै देखिन्छ । विदेशमा रहेकाहरुको ज्ञान र सीप भारत सरकारले प्रचूर उपयोग गरिरहेको छ । यस्तै अपेक्षा नेपालको पनि हुनु अस्वाभाविक हैन । विदेशमा रहेका नेपाली (जन्मले नेपाली, कर्मले विदेशी बनेका)हरुबाट धेरै अपेक्षा गरिएको छ र उनीहरुबाट केही हदसम्म मातृभूमिका लागि लगानी गरिएको पनि नकार्न सकिन्न । तर नेपालमा त्यस्तो भएन । हरेक महाधिवेशनमा प्रतिबद्धता दोहोरिन्छ, काम हुन्न ।